“Waxaan diyaar u nahay inaan u tartano La Liga iyo Champions League” – Xiddig kooda Barcelona ah – Gool FM
(Barcelona) 10 Juun 2020. Daafaca kooxda Barcelona ee Clément Lenglet ayaa shaaca ka qaaday diyaargarowga ay kooxdiisa ugu jirto inay u dagaalanto ku guuleysiga horyaalka La Liga ee dalka Spain iyo tartanka Champions League xilli ciyaareedkaan 2019-2020.
Daafaca reer France oo ka maqnaan doono kulanka Real Mallorca ay Sabtida kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mondo Deportivo” wuxuu kaga hadlay hamiga Blaugrana.
Clément Lenglet ayaa u arka in kooxdiisa Barca ay diyaar u tahay inay u dagaalanto labada koob ee La Liga iyo Champions League, wuuxuna yiri:
“Horyaalka La Liga waxaan ku hoggaamineynaa labo dhibcood, Champions League waan u tartami karnaa”.
“Taasi waxay u baahan tahay shaqo badan, laakiin waa fursad weyn sababtoo ah horay uma dhicin, waxaanan si adag ugu ciyaari doonaa kulamada labada tartan” ayuu yiri Clément Lenglet.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Barcelona ayaa sameysan tababarka guud maanta oo Arbaco ah, iyadoo ay ka qeyb galeen dhamaan ciyaartoyda oo ay ka mid ahaayeen Lionel Messi, Samuel Umtiti iyo Luis Suarez.